ကမ္ဘာ့တရားရုံးက စစ်ကောင်စီကို နှပ်ကြောင်းပေးလိုက်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာရုံးချိန်း - News Alpha
Homepage / Opinion / ကမ္ဘာ့တရားရုံးက စစ်ကောင်စီကို နှပ်ကြောင်းပေးလိုက်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာရုံးချိန်း
ကမ္ဘာ့တရားရုံးက စစ်ကောင်စီကို နှပ်ကြောင်းပေးလိုက်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာရုံးချိန်း
By Living MyanmarPosted on January 14, 2022 January 15, 2022
ကမ္ဘာ့တရားရုံးမှာ ရိုဂျင်ဂျာအမှု့အတွက် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ကြားနာစစ်ဆေးပါတော့မယ် ။ အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ မြန်မာစစ်တပ်က ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုအပေါ်မှာ သတ်ဖြတ်နှိမ်နင်းမှု့တွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။
ရိုဟင်ဂျာ ၇ သိန်းကျော်ဟာ ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနိုင်ငံဘက်ကို ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ် ။ ဒီအခြေအနေမှာ ကုလသမဂ္ဂ စိုစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က ” လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကျူးလွန်ခဲ့တယ် ” လို့ ကောက်ချက်ချခဲ့တာပါ ။
၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ ဒီအမှု့ကို ငြင်းဆိုဖို့အတွက် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နယ်သာလန်နိုင်ငံက ဟိဂ်မြို့ကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက် ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ် ။
မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က ဒီအမှု့ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေသူတစ်ဦးက” ရိုဟင်ဂာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ၊ အစီရင်ခံစာတွေကို ၆ လ တစ်ကြိမ် တင်သွင်းပါတယ် ။ တရားရုံးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ် ။
တပ်မတော်အစိုးရဟာ နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုဖို့ ကမ္ဘာ့တရားရုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ ပြသဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ် ” လို့ ရိုက်တာသတင်းဋ္ဌာနကို ပြောကြားထားပါတယ်။
ဒီတစ်ခါဆင့်ခေါ်ထားတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီရုံးချိန်းမှာ ICJ က ” မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု့ ရှိ / မရှိ ” မေးခွန်းကို ကြားနာပြီး အရေးယူမှာပါ ။
သုံးသပ်ရရင် ……….၊ မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ ကမ္ဘာ့တရားရုံးဟာ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် အပိုင်ဘဲ ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးကိုယ်စီနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြပါလိမ့်မယ် ။
စစ်ကောင်စီဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဝင်အစိုးရဆိုတာ ပြသနိုင်ဖို့ ရိုဟင်ဂျာအမှု့ကို ကမ္ဘာ့တရားရုံးမှာ ရင်ဆိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ် ။ ဒါဟာ စစ်ကောင်စီအတွက် ကြီးမားတဲ့ အခွင့်အရေးပါ ။
ကမ္ဘာ့တရားရုံးမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဝင် စစ်အစိုးရဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ ကမ္ဘာသိ ပြချင်နေတာပါ ။ ကမ္ဘာ့တရားရုံးက ဘယ်လိုပြစ်ဒဏ်ပေးပေး ဂရုစိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ သူတို့အတွက်က တရားဝင်မှု့ ပြသဖို့ကသာ အရေးကြီးနေတာပါ ။
ကောင်းပြီ …..၊ ရိုဟင်ဂျာအမှု့ကို စစ်ကောင်စီဘက်က ဘယ်လိုလုပ်နိုင်သလဲဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးက ကျေနပ်လာအောင် ” အပြစ်ရှိပါတယ် …၊ ရိုဟင်ဂျာတွေကို နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပါ့မယ် …၊ နေရာပေးပါမယ် …၊ အိမ်ဆောက်ပေးပါမယ် …၊ လေယာဉ်နဲ့လာခေါ်ပါမယ် …” ဆိုသလို လိုက်လျောမှု့တွေနဲ့ ခေါင်းညိတ်နိုင်ပါတယ် ။
ကမ္ဘာ့တရားရုံးဘက်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှု့တွေကို စစ်ကောင်စီအပေါ်မှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ သိစေချင်တဲ့အတွက် ရိုဟင်ဂျာအမှု့ကို နှပ်ကြောင်းပေးပြီး ဆင့်ခေါ်လိုက်တာပါ ။ တရားဝင်အစိုးရအဖြစ်နဲ့ ကမ္ဘာသိအောင် ပြချင်နေတဲ့ စစ်ကောင်စီဟာ ကမ္ဘာ့တရားရုံးကို သေချာပေါက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာ့တရားရုံးက သိထားမှာပါ ။
ဆိုတော့ …… စစ်ကောင်စီဟာ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ကမ္ဘာ့တရားရုံးကို သွားပါလိမ့်မယ် ။ မြန်မာကို ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတာ ပြပါလိမ့်မယ် ။ တရားဝင်မှု့အတွက် ကျေနပ်လောက်အောင် ရိုဟင်ဂျာအရေးကို လိုက်လျောလာပါလိမ့်မယ် ။
ဒီတော့ ……၊ ကမ္ဘာ့တရားရုံးက နှပ်ကြောင်းပေးထားတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ရင်ဆိုင်ပြီးရင် အာဂျင်တီးနားတရားရုံးနဲ့ ICC မှာ စွဲချက်တင်ထားတဲ့အမှု့ကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရမှာပါ ။
ရိုဟင်ဂာအရေးမှာ ကိုယ်စားလှယ်လွှတ်လို့ရပေမယ့် ၊ ဖေဖော်ဝါရီကနေစခဲ့တဲ့ ပြည်တွင်း စစ်ရာဇဝတ်မှု့မှာတော့ အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင် ကိုယ်တိုင် တက်ရမှာပါ ။ လတ်တလော သက်သေအထောက်အထားစုံလင်စွာနဲ့ စွဲချက်တင်ထားတဲ့ အမှု့ကို ဆင့်ခေါ်နိုင်ဖို့ ၊ ရိုဟင်ဂျာအရေးဟာ နှပ်ကြောင်းပေးပြီး စစ်ကောင်စီကို လက်ခံလိုက်တာပါ ။
ကမ္ဘာ့တရားရုံးရဲ့ နှပ်ကြောင်းက ရိုဟင်ဂျာအရေးကို သိက္ခာရှိရှိ ရင်ဆိုင်တယ်ဆိုရင် ၊ ပြည်တွင်းမှာကျူးလွန်ထားခဲ့ ၊ ကျူးလွန်နေဆဲ စစ်ရာဇဝတ်မှု့တွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ အသိပေးချင်တာပါ ။
စာရေးသူ နားလည်ထားသလောက်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့တရားရုံးမှာ စွဲချက်တင်ခံထားရသူဟာ ၊ အမှု့ကို လာရောက်ရင်ဆိုင်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတကာရဲအဖွဲ့ကို တာဝန်ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
စစ်ကောင်စီဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ဘယ်လိုအကွက်တွေနဲ့ ရှောင်ကွင်းပြလေမလဲ ….? ကမ္ဘာကြီကရော စစ်ကောင်စီကို ဘယ်လိုအကွက်နဲ့ ချောင်ပိတ်ဖမ်းတော့မလဲ ….?
ဆိုတာက ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နဲ့ မင်းဂွတ်သီးသုံးလုံး အမှု့လို ရှုတ်ထွေးနက်နဲနေပြီး သဲထိတ်ရင်ဖိုနိုင်လှပါတယ် ။ စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း ဓာတ်တွေ ၊ နတ်တွေ ၊ ယတြာတွေနဲ့ နတ်ပူးသလို ရင်တွေ တစ်ဒိန်းဒိန်း ခုန်နေတော့မှာပါ ။
ကမ္ဘာ့တရားရုံးကလည်း ပညာတတ်တွေပီပီ ဘယ်လိုထိုးကျွေးရင် ၊ ဘယ်ဟာကို မျှားခေါ်မယ် ဆိုတဲ့ ကျကျနနအစီအစဉ်တွေ ရှိထားမှာမလွဲပါဘူး ။
Posted in OpinionTagged ရိုဟင်ဂျာရုံးချိန်း
Previous post မုံရွာမြို့မှာ ပေါက်ကွဲသံထွက်ပေါ်ပြီးနောက် လမ်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပျက်
Next post ပြည်တွင်း ပြည်ပ မှ ဖိအားများ မြင့်တက်လာနေဟု စစ်ကောင်စီဝန်ခံ